Tottenham oo kooxda Man United kula tartamaysa saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League – Gool FM
Tottenham oo kooxda Man United kula tartamaysa saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League
Haaruun March 17, 2019
(England) 17 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay ku garaacdo Manchester United saxiixa Sessegnon.
Tottenham ayaa kaga horreysa haatan kooxda Manchester United tartanka loogu jiro in naadiga Fulham looga soo qaato Ryan Sessegnon.
Jariiradda Sunday Express ayaa warinaya in Spurs ay Manchester United kaga gacan sarreyso tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga Ryan Sessegnon kaasoo ka ciyaara horyaalka Premier League kana tirsan kooxda Fulham.
18-sano jirkaan garabka ka dheela ayaa waxaa doonayey saxiixiisa intooda badan kooxaha sare ee horyaalka Premier League, sidoo kale naadiga Paris Saint-Germain ee ka dhisan Waddanka Faransiiska ayaa dhankeeda ka baacsanaysa.
Yeelkeede, kooxda Fulham ayaa doonaysa inay laacibkeeda Ryan Sessegnon ka dhacsato kooxaha u xusul duubaya helitaankiisa, waxaana ay rabtaa inay heshiis cusub ka saxiixato.
Sessegnon ayaa diiday inuu qandaraaskiisa kordhiyo, waxaana laga yaabaa inuu dhaqaaqo dhammaadka xilli ciyaareedkan, laakiin ma doonayo inuu ka tago Magaalada London, taasoo Spurs siineysa faa’iido.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Genoa iyo Juventus oo la shaaciyey & Cristiano Ronaldo oo maqan
RASMI: Macallin Ajnabi ah oo loo dhiibay hoggaanka xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta